China 650mAh AB06 Pen Style batterie miaraka amina karazan-tseranana roa, seranan-tsambo miaro ny cartridges, akanjo batterie ho an'ny orinasa mpamokatra Cartridge 510 Universal sy mpanamboatra | Vape Alphagreen
650mAh AB06 Pen Style batterie miaraka amina karazany roa, seranan-tsambo miaro vy, fatran'ny bateria ho an'ny Cartridge Universal 510
Famaritana fohy: Manamboatra sy manome batterie AB06 izahay, AB06 dia bateria mahazaka lehibe manana endrika miavaka tsara eo amin'ity tsena ity.
Vidiny F0B: US $ 3.1 - 3.35 / Piece
1. Fampidirana ny vokatra ny AB06 Auto-Draw Inhalation 510 kofehy kofehy
AB06 dia iray amin'ireo endrika tsy manam-paharoa Alphagreen. Karazana kofehy 510 misy satroka vy. Ny fonosana vy dia miaro ny cartridge amin'ny vovoka na fahasimbana.
AB06 dia bateria 650mAh miaraka amina fiasana hafanana mialoha sy hafanana manokana azo ovaina. Tsindrio 3 ho an'ny volt azo ovaina. mena: 4.0V, maintso: 2.7v, Manga: 3.4V. Clic 2 ho an'ny preheat 1.8V, preheat 15s (jiro miloko marevaka). Tsindrio 5 mandeha / maty, mandeha ho azy aorian'ny fitazonana ny asa mandritra ny 12 taona.
Karazana seranan-tseranana roa, famahanana kofehy 510 ary famahanana micro micro ambany. Mandritra ny famandrihana azy: jiro mena mena, fenoina feno: endrika jiro mena
Misy fiasan'ny hery ambany mampitandrina, raha ny herinaratra <10%, miova in-10 ny fitaovana famoahana.
2. Paramèteran'ny vokatra (famaritana) an'ny AB06 Auto-Draw Inhalation 510 kofehy kofehy
Kalitaon'ny kilasy A
Biraon'ny sela bateria
3. Fampisehoana vokatra sy fampiharana ny AB06 Auto-Draw Inhalation 510 kofehy kofehy
—— bateria kofehy 510, mety amin'ny cartridge an'ny 510 manerantany.
——320mAh fahafaha-miasa, tady 3.6V.
——Fandraisana anjaran-bokotra, fofonaina aotomotika.
——Jiro famantarana etsy ambany.
Ahoana ny fanasokajiana ny votoatin'ny bateria
Volavola tsy manam-paharoa AB06
AB06 dia bateria mahazaka lehibe, miaraka amina fiasa maro sy endrika manokana, Pen style vape dia manome ny olona fahatsapana voalohany lalina.
Vita tamin'ny loko vy, volamena, volafotsy ary mainty vita amin'ny vy izy io, ary azonay atao manokana ny manisy pirinty ny loko sy ny logo ho takiana aminao.
Ny fiasan'ny herinaratra alohan'ny hafanana sy miovaova dia manome ho an'ny mpanjifa samihafa, sy akanjo ho an'ny solika samihafa.
Indraindray, raha matevina loatra ny menaka dia mila tsindrio ny hafanana mialoha sy hanafana ny menaka isika, dia afaka mikoriana be ny solika, ho tsara kokoa ny tsiro sy ny etona.
Ity bateria ity dia misy satroka toy ny pen, ny satroka vy dia afaka miaro ny cartridge anao amin'ny vovoka sy fahasimbana. Ny satroka ho an'ny cartridge mahazatra 1.0ml Ccell.
Manokana, mampiasa electrode lohataona izahay ho anisan'ny seranan-tseranana.
Teo aloha: MAX Battery Butt Activation Adjustable Voltage Vape Battery miaraka amin'ny 510 Thread, mety amin'ny Universal CBD / THC / Delta 8 Vape Cartridge
Manaraka: AT09 Easy Snap-in, mpamokatra seramika feno tsy misy cartridge vy mavesatra miaraka amin'ny tsiro madio sy etona lehibe
Batterie Vape nomerika
Battery Vape mety
Bateria Usb Vape
Vola vidin'ny bateria Vape
Vape Battery Charger mijanona mena
© Copyright - 2010-2021: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra asongadina, Sitemap, penina vape azo, penina vape bateria, vape menaka cbd azo ampiasaina, penina vape azo averina, Bateria 510, cbd vape pen, Vokatra rehetra